Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 2:1-52
2 Mumazuva iwayo, Kesari Agasto akapa murayiro wekuti vanhu vemuumambo hwese* vanyorwe pasi mazita avo. 2 (Kunyoresa uku kwekutanga kwakaitika Kwiriniyo ari gavhuna weSiriya.) 3 Uye vanhu vese vakaenda kunonyoresa, mumwe nemumwe kuguta rekwake. 4 Josefa+ akabvawo kuGarireya, muguta reNazareta, akaenda kuJudhiya, kuguta raDhavhidhi, rinonzi Bhetrehema,+ nekuti aiva weimba uye wedzinza raDhavhidhi. 5 Akaenda kunonyoresa aina Mariya, uyo waakanga aroora, sezvavakanga vavimbisana,+ uye akanga akurirwa nepamuviri.+ 6 Pavakanga vari ikoko, nguva yekuti asununguke yakakwana. 7 Uye akasununguka mwanakomana wake wedangwe,+ akamuputira nemachira, akamuradzika muchidyiro chezvipfuwo,+ nekuti mumba mevaenzi makanga musina nzvimbo yekuti vagare. 8 Munharaunda iyoyo maivawo nevafudzi vaigara kunze kwemisha vachichengeta zvipfuwo zvavo usiku. 9 Vakabva vangoona ngirozi yaJehovha* pamberi pavo, kubwinya kwaJehovha* kukavapoteredza, vakatya kwazvo. 10 Asi ngirozi yacho yakati kwavari: “Musatya, nekuti ndauya kuzokuzivisai mashoko akanaka emufaro mukuru uchava nevanhu vese. 11 Nekuti nhasi maberekerwa muponesi,+ Kristu Ishe,+ muguta raDhavhidhi.+ 12 Uye ichi ndicho chiratidzo chamuchaona: Muchawana mwana mucheche akaputirwa nemachira, akarara muchidyiro chezvipfuwo.” 13 Pakarepo, uto guru rekudenga rakabva ravapo rikabatana nengirozi+ yacho ndokurumbidza Mwari richiti: 14 “Mwari ngaakudzwe kumusorosoro, uye vanhu vaanofarira vari panyika ngavave nerugare.” 15 Saka ngirozi dzacho padzakaenda kudenga, vafudzi vakasara vachitaurirana vachiti: “Tinotofanira kuenda kuBhetrehema tinoona zvaitika, zvataziviswa naJehovha.”* 16 Vakakurumidza kuenda, vakawana Mariya naJosefa, uye mucheche wacho akarara muchidyiro chezvipfuwo. 17 Pavakaona izvi, vakazivisa vanhu mashoko avakanga vaudzwa nezvemwana uyu. 18 Uye vese vakazvinzwa vakashamiswa nezvavakaudzwa nevafudzi, 19 asi Mariya akatanga kuchengeta mashoko ese aya, achiafungisisa mumwoyo make.+ 20 Vafudzi vakabva vadzokera, vachikudza nekurumbidza Mwari nekuda kwezvinhu zvese zvavakanzwa nekuona, sekuudzwa kwavakanga vazviitwa. 21 Kuzoti papfuura mazuva 8, payakanga yava nguva yekuti vamuchecheudze,+ akatumidzwa kuti Jesu, zita raakapiwa nengirozi, amai vake vasati vava nepamuviri pake.+ 22 Uyewo, nguva yekuti vanatswe maererano neMutemo waMozisi+ payakanga yakwana, vakaenda naye pamberi paJehovha,* kuJerusarema, 23 sekunyorwa kwazvakaitwa muMutemo waJehovha* kuti: “Dangwe rese rechirume* rinofanira kunzi idzvene kuna Jehovha.”*+ 24 Uye vakapa chibayiro maererano nezvinotaurwa muMutemo waJehovha:* “njiva mbiri kana kuti hangaiwa diki mbiri.”+ 25 MuJerusarema maiva nemumwe murume ainzi Simiyoni, uye murume uyu akanga akarurama uye akazvipira pakunamata, achimirira kunyaradzwa kwaIsraeri,+ uye mweya mutsvene wakanga uri paari. 26 Akanga akatoratidzwa naMwari pachishandiswa mweya mutsvene kuti akanga asingazooni rufu asati aona Kristu waJehovha.* 27 Achitungamirirwa nemweya mutsvene akapinda mutemberi, uye vabereki vacho pavakapinda nemwana wacho, Jesu, kuti vaite naye zvavaifanira kuita maererano neMutemo,+ 28 akatora mwana wacho akamubata mumaoko, akarumbidza Mwari achiti: 29 “Changamire Ishe, iye zvino mava kuita kuti muranda wenyu aende murugare+ maererano nezvamakazivisa, 30 nekuti maziso angu aona nzira yenyu yekuponesa nayo+ 31 yamakagadzira marudzi ese evanhu achiona,+ 32 chiedza+ chekubvisa nacho chinhu chakafukidza zviso zvemarudzi,+ kukudzwa kwevanhu venyu vaIsraeri.” 33 Baba naamai vemwana wacho vakaramba vachishamiswa pavainzwa zvaitaurwa nezvake. 34 Simiyoni akavakomborerawo akati kuna Mariya amai vemwana: “Inzwa! Mwana uyu atumwa kuti pave nekuwa+ nekumuka kwevakawanda pakati paIsraeri+ uye achava chiratidzo chinotaurwa zvakaipa nezvacho+ 35 (chokwadi, bakatwa refu richakubaya*),+ kuti kufunga kwemwoyo mizhinji kuiswe pachena.” 36 Kwaiva nemuprofitakadzi ainzi Ana, mwanasikana waFanueri, wedzinza raAsheri. Mukadzi uyu akanga achembera uye akanga agara nemurume wake kwemakore 7 kubvira paakaroorwa,* 37 uye aiva chirikadzi ine makore 84. Akanga asingamboshayikwi patemberi, achiita basa dzvene masikati neusiku, achitsanya nekunyengetera achiteterera. 38 Panguva iyoyo chaiyo, akaswedera pedyo navo akatanga kuonga Mwari uye kutaura nezvemwana wacho kuvanhu vese vaimirira kununurwa kweJerusarema.+ 39 Saka pavakanga vaita zvinhu zvese maererano neMutemo waJehovha,*+ vakadzokera kuGarireya kuguta rekwavo reNazareta.+ 40 Uye mwana wacho akaramba achikura uye achisimba, achizadzwa neuchenjeri, uye akaramba achifarirwa naMwari.+ 41 Vabereki vake vaigara vachienda kuJerusarema gore negore kumutambo wePaseka.+ 42 Paakanga ava nemakore 12, vakaenda kuJerusarema sezvaigara zvichiitwa pamutambo wacho.+ 43 Pavakanga vava kudzokera, mazuva emutambo wacho apera, mukomana wacho, Jesu, akasara muJerusarema, uye vabereki vake havana kuzviziva. 44 Vakafunga kuti akanga ari pakati pevanhu vavaifamba navo, saka vakafamba mufambo wezuva rimwe chete, vakabva vatanga kumutsvaga muhama dzavo nevanhu vekuziva. 45 Asi pavakamushaya, vakadzokera kuJerusarema ndokunyatsomutsvaga. 46 Pashure pemazuva matatu, vakazomuwana ari mutemberi, akagara pakati pevadzidzisi achivateerera nekuvabvunza mibvunzo. 47 Asi vese vaimuteerera vaishamiswa nekunzwisisa kwake nemhinduro dzake.+ 48 Vabereki vake pavakamuona, vakashamiswa, uye amai vake vakati kwaari: “Mwanangu, watitambudzirei kudaro? Ini nababa vako taona nhamo nekukutsvaga.” 49 Asi iye akati kwavari: “Manga muchinditsvagireiko? Hamuna kuziva here kuti ndinofanira kuva mumba maBaba vangu?”+ 50 Asi havana kunzwisisa zvaaivaudza. 51 Akabva aenda navo vakadzokera kuNazareta, uye akaramba achizviisa pasi pavo.*+ Uye amai vake vakanyatsochengeta mashoko aya ese mumwoyo mavo.+ 52 Jesu akaramba achiva neuchenjeri uye achikura uye achifarirwa naMwari nevanhu.
^ Kana kuti “vemunyika yese.”
^ ChiGir., “Dangwe rese rechirume rinovhura chibereko.”
^ Kana kuti “richabaya mweya wako.”
^ ChiGir., “kubvira paumhandara hwake.”
^ Kana kuti “achivateerera.”